Akaziwa ozolandela esihlalweni sobukhosi baka-Bhaca | Scrolla Izindaba
Akaziwa ozolandela esihlalweni sobukhosi baka-Bhaca
Umbango wezikhundla zobukhosi bama-Mpondo ase-Qawukeni osekuphele cishe iminyaka eyikhulu ukhona usuphinde waqala phansi.
Ababeyobhonga emswaneni ababehambele ukutshalwa kweSilo uZanozuko Sigcawe esigodlweni sase-Ndimakude Great, e-Flagstaff, e-Eastern Cape ngoLwesibili, banikezwe umfanekiso wombango ozayo wezikhundla.
Sekuphele iminyaka izigodlo ezimbili zasebukhosini zibanga ukuthi isiphi okufanele siveze iSilo esisemthethweni sama-Mpondo.
UBukhosi bungezinye zezinto ezibaluleke kakhulu esifundazweni njengoba kuyikhaya leSilo uBotha Sigcawu owake waba nguNdunankulu wase-Transkei. Umakadebona womzabalazo nowayenguNgqongqoshe uStella Sigcawu naye uphuma kulo mndeni.
Kuleli sonto elinye iqembu lomndeni lithole umyalelo weNkantolo ePhakeme mayelana nelungelo lokwenza amasiko athile endabuko ngaphambi kokutshalwa kweSilo, nokuthi kukhulunywe naye uma kulungiselelwa umngcwabo okhethekile weSigaba Sokuqala.
Ebona sengathi iqembu lakhe libukelwa phansi, iNkosana uMbasa Sigcawu ungene enkundleni wasola uhulumeni ngokuchema nohlangothi olulodwa lomndeni nokushaya indiva umyalelo wenkantolo.
“Uhulumeni uyawazi umndeni wasebukhosini owabeka iSilo esikhotheme njengeSilo sama-Mpondo. Namuhla kukhona abantu lapha abakhetha ukubhekana nabanye abantu esingabazi,” kusho iNkosana uSigcawu.
“Ukhona oyibamba leSilo. Ngiyaxolisa. Ngicela silungise izinto ezimbalwa ngoba kunovalo lokuthi uma singethuli umbono ophikisayo, kuzoba nombono oyiphutha ngalo lonke lolu bishi esilubona lapha”.
ISilo esikhotheme uZanozuko sathatha isihlalo sobukhosi ngemuva kweminyaka yezingxabano ezaziphakathi kwamalungu omndeni okwagcina ngokuthi iKhomishini kaNhlapho emayelana nombango wobuholi bomdabu imbone njengeSilo esifanele.
Olunye uhlangothi lomndeni lavunwa iNkantolo yoMthethosisekelo iphikisa okutholwe iKhomishini kaNhlapho kodwa owayenguMengameli wezwe uJacob Zuma wasichitha leso sinqumo.
Njengoba iSilo uZanozuko sikhotheme, akucaci ukuthi ngubani okumele abe iSilo sesizwe sama-Mpondo.
Kulindeleke ukuthi umbango udlulele emafeni eSilo okwenza izinto zibe nzima kakhulu njengoba iSilo esikhotheme sinomunye uNdlunkulu; inkosazane yase-Mount Frere ebukhosini baka-Bhaca.